विवाहको केहि घण्टामै दुलहीले नदीमा हा’म फा’ल्दा, दुलहा किनारामा बसेर एकोहोरो हेरिरहे…. – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/विवाहको केहि घण्टामै दुलहीले नदीमा हा’म फा’ल्दा, दुलहा किनारामा बसेर एकोहोरो हेरिरहे….
काठमाडौँ। भारतको राजस्थान र मध्यप्रदेश राज्यको सी’मामा रहेको पाली ब्रिजमा आइतबार बिहान अञ्जु नामकी दुलहीले माइतीबाट विदा भएपछि घर पुग्नुअघि नै नदीमा हा’म फा’लेकी छिन् । उनको खोजी सोमबार पनि जारी रह्यो । दुलहीका माइती र घर पक्षका सदस्य पनि घ’टनास्थलमा उपस्थित भए । दुलहा पनि किनारामा बसेर एकोहोरो हेरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ ।
बा’न्ता आउन लागेको भनेर राकिन् गाडीः
प्रहरीका अनुसार अल्लापुर गाउँमा बस्ने रामप्रसाद सैनीकी छोरी अञ्जु सैनीको विवाह शनिबार भयो । मध्यपुरको श्योपुर जिल्लाबाट जन्ती आयो । त्यसपछि आइतबार बिहान दुलहीका आमा–बुवा र आफन्तले दुलहीलाई खुसी–खुसी बिदाई गरे । त्यसपछि दुलहीले राजस्थान र मध्य प्रदेशको सीमामा रहेको पाली ब्रिजमा पुग्ने बित्तिकै चालकलाई आफूलाई बा’न्ता आउन लागेको भनेर गाडी रोक्न लगाइन् ।
चालकले झ्यालबाटै बा’न्ता गरिदिन भन्दै गाडी रोकेनन् । दुलहीले पुनः आफूलाई असाध्यै गा’ह्रो भएको भन्दै गाडी रोक्न आग्रह गरिन् । उनले चालकको हात समातिन् जसका कारण चालकको सन्तुलन बि’ग्रन थाल्यो । सन्तुलन बि’ग्रिएको देखेर चालकले गाडी रोके । दुलहा र परिवारका अन्य सदस्यले केही बुझ्नुअघि नै दुलही गाडीबाट निस्किइन् र रेलिङमा चढेर हा’म फा’लिन् । प्रत्यक्षदर्शी चालकका अनुसार नदीमा हा’म फा’लेपछि उनी केही बेर पानीमा डु’बेको र पछि पानीमाथि आएर छ’टप’टाएको देखिइन् । तर त्यहँ उपस्थितमध्ये कसैलाई पनि पौ’डी खेल्न नआउने भएकोले दुलहीलाई सहयोग गर्न नसकेको बताए ।